SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI) / FJKM
Ny Filoha sy Birao Foibe SAMPATI manoloana ny fiatrehana ny fanavaozana ny tompon’ andraikitra eo aminy dia manao antso avo amin’izay te-hirotsaka ho fidiana ho TONIA. Toy izao ny fepetra takina :
* Filoha Mpanazava sy Tily mpikambana amperinasa nandritra ny 5 taona teo amin’ny vondron’ny Mpampiofana na tari-panofanana ary voamarin’ny tompon’ andraikitra mifanandrify amin’izany .
* Raha Mpitandrina dia efa niasa 5 taona teo amin’ny fitondram-piangonana ary efa voatokana, raha Laika dia mpitoriteny ary manana sertifika avy amin’ny SEFALA na SETELA (manolotra dika mitovy ) .
* Manana ny mari-pahaizana Licence (BAC + 3)ho an’ny Mpitandrina sy Laika (manolotra ny dika mitovy).
* 35 taona ka hatramin’ny 50 taona eo am-pilatsahana .
* Efa nanatrika Zaikabe indray mandeha farafahakeliny .
* Manao taratasy filazana ny momba ny tena sy taratasy fangatahana ahitana ny antony hilatsahana .
* Mpikambana ao amin’ny ambaratongan-drafitra SAMPATI .
* Taratasy fanolorana avy amin’ny SP / SAMPATI sy Mpitandrina ao amin’ny Fitandremana misy ny mpilatsaka ho an’ny Laika , ary avy amin’ny SP reniny sy SP SAMPATI ho an’ny Mpitandrina .
* Taratasy fanolorana avy amin’ny ambaratonga mpiahy ho an’ny Foibe .
* Taratasy faneken’ny vady ary manan-janaka 03 raha be indrindra .
Misokatra ny filatsahan-kofidina hatramin’ny ZOMA 05 AOGOSTRA 2011. Ny tsy fahampian’ny antontan-taratasy takina dia midika tsy fahalavorarian’ny filatsahana . Ny fanaterana ny anton-taratasy dia azo alefa amin’izao adiresy izao :
FOIBE SAMPATI FJKM, BP 623 ANTANANARIVO 101 , na aterina ao ami’n varavarana 508 FOIBE FJKM , Rihana faha- 5 . Trano Ifanomezantsoa Analakely .